अभिनेत्री सुहाना थापाको आज जन्मदिन, कति वर्ष पुगिन त् ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/अभिनेत्री सुहाना थापाको आज जन्मदिन, कति वर्ष पुगिन त् ?
नायिका तथा फिल्म निर्देशक झरना थापाकी छोरी सुहाना थापाको आज जन्मदिन परेको छ। फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ बाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेकी नायिका सुहाना थापाको जन्मदिनमा झरना थापाले सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस सहित सुहानाले केक काट्दै गरेको फोटो पोस्ट गर्दै सुभाकामना दिएकि छिन।
उक्त फोटोमा धेरैले कमेन्ट गर्दै सुभकामना दिएका छन्। १९९८ को मे ८ मा जन्मिएकी उनि २३ वर्ष पुगेकी छिन। भने केहि दिन अगाडीमात्र झरना थापा, अभिनेत्री सुहाना थापा र निर्माता सुनिल कुमार थापासंग अमेरिका प्रस्थान गरेकि छिन । सुहानाले अमेरिकाको कलेजबाट मनोविज्ञानमा स्नातक गरिरहेकी छन् । चलचित्रमा काम गर्नुभन्दा अगाडि उनी अमेरिकामै बसेर अध्ययन गरिरहेकी थिइन् ।
‘ए मेरो हजुर ३’ बाट अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी उनले अहिले अभिनयसँगै अध्ययनलाई पनि एकसाथ अगाडि बढाइरहेकी छिन् । ‘ए मेरो हजुर ४’ रिलिजपछि उनले होम प्रोडक्सनको अर्को चलचित्र ‘भागवत गीता’ मा काम गर्नेछिन् ।
स्वस्तिमा र अर्जुन कुमारबीच झगडा, यस्तो रहेछ बास्ताविकता !